Ndifuna ukwabelana ngebali lomnye umntu kwi-instagram yam. Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndifuna ukwabelana ngebali lomnye umntu kwi-Instagram yam.
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 348
Okwangoku zininzi iindlela zokunxibelelana kwezentlalo ezisinika ukuba sabelane ngazo kwaye sifunde malunga neempapasho ezahlukeneyo kunye namabali, i-Instagram yenye yeentandokazi xa kufikwa kupapasho lwamabali amafutshane. Uninzi lwezi zinomdla kakhulu okanye zitsale umdla omkhulu kangangokuba singathanda ukuzigcina okanye sabelane ngazo nabantu esiqhagamshelana nabo.
Nangona kunjalo, I-Instagram ayisivumeli Ukwenza olu hlobo lwento, sele kunzima ukuba sabelane ngemifanekiso kunye neevidiyo ezivela kwiindonga zabafowunelwa bethu, ewe, kuya kuba njalo namabali abelana ngawo aya kuthi athathwe njengabucala nawabucala kwisicelo. Kodwa ungakhathazeki kweli nqaku siza kukufundisa indlela yokwabelana ngeempapasho ezikwibali lethu.
Instagram emva izicelo ezininzi ezivela kubasebenzisi bakho ithathe isigqibo sokufaka ngaphakathi kwi-app ukhetho lokwabelana ngamabali kubantu besithathu, kodwa lumka, unokukwenza oku kuphela ukuba ukhankanyiwe ebalini, kungenjalo ngekhe ukwazi ukuzenza, nangona kunjalo, zihlala zikhona iindlela zokwabelana amanye ala mabali naxa engasichazanga kuwo. Apha siza kukubonisa indlela yokwenza.
Iindlela zokwabelana ngamanye amabali:
Xa sikhankanyiwe ebalini:
Kwimeko yokukhankanywa ebalini, inkqubo ye-Instagram iya kukwenza isaziso esihambelanayo, kokubini kwicandelo lamagqabaza nangomyalezo othe ngqo.
Ukuba le yimeko yakho, kuya kufuneka ufake icandelo le- "Yongeza umxholo kwibali lethu", apho ngasemva, ukhetho lokongeza umxholo ebalini lakho luya kubonakala kwaye uya kuba nakho ukongeza ibali okhankanywe kulo kwiprofayile yakho.
Ngexesha lokupapasha inkqubo bonisa ukuba ibali kwabelwana ngalo kwiakhawunti yomnye umntu.
Olu khetho I-Instagram iyakukunika njengakwimeko yangaphambili okokoko umntu othe wakukhankanya kwibali lakhe akanayo i-akhawunti yabucala yesi sicelo, kungenjalo iinkqubo zokhuseleko ze-Instagram aziyi kubavumela
Xa sifuna ukupapasha ebalini lethu upapasho lomnye umntu:
I-Instagram ukuba iyasivumela esi senzo, kuphela ukuba i-akhawunti ayimfihloUkuba kunjalo, ngabalandeli bale akhawunti kuphela abaya kukwazi ukubona ukupapashwa.
Kwimeko yeakhawunti yoluntu:
Emva kweposti nganyeEmazantsi okupapashwa sifumana uthotho lwee-icon, siya kukhetha i-icon emile njengeplanethi yenqwelomoya.
Emva kokukhetha "Yongeza ukupapashwa kwibali lakho." Ukuba unqwenela, ungasebenzisa le ndlela ukuthumela upapasho njengomyalezo kubahlobo bethu.
Khetha umfanekiso okanye, ukusilela oko, hlela ividiyo kwaye ukhethe into ofuna ukuyipapasha kwibali lakho.
Uncedo lwale ndlela yokwabelana ngezithuba ebalini lakho kukuba ngumntu othathe kuye lo myalezo ngekhe waziswe yinkqubo ye-Instagram, njengoko i-akhawunti kawonkewonke.
2 Iindlela zokwabelana ngamanye amabali:
2.1 Xa sikhankanyiwe ebalini:
2.2 Xa sifuna ukupapasha ebalini lethu upapasho lomnye umntu:
3 Kwimeko yeakhawunti yoluntu:
Ndifuna ukukhuphela ividiyo kwi-Facebook.
Ndingathanda ukwenza iakhawunti yeFacebook.